Yintoni enokuyilindela kwi-2014 entsha? Kunzima ukuqhubeka kunye nemikhwa yentlobo. Ibhinqa kufuneka lihlale liyazi malunga neentshukumo zefashoni. Ngokukodwa xa ixhala ngekhanda lakhe. Namhlanje kuyafaneleka ukujonga ukuba zeziphi iintlobo zezinwele ze-styles eziza kufezwa kulo nyaka. Awukwazi ukuqhubeka kunye nefashoni kwisinyathelo esinye.
U-Sasha Broiler ungumenzi wepallist omdala odala imifanekiso emangalisayo kwi-fashion show. Uyingcali yamazwe ngamazwe ngesitayela. Namhlanje, umsebenzi wakhe unokubonakala kumaphephancwadi amaninzi kunye neendlela zokuhamba. USasha wenza iinwele ezintle. Kwaye ulungele ukwabelana namantombazana akhe iimfihlo. Ngoku singabonakala njengeenkwenkwezi, senze iinqweliselo zefestile ekhaya. Kule nto akukho nto inzima.
U-Sasha Breuer ungumdlali othakazelisayo odala i-styles ebonakalayo kunye ne-sexy. USasha uhlala eLondon, kodwa usebenza kwihlabathi lonke. Akanayo ulinganayo ngesitayela nangendlela. Ngoku usebenza namaphephancwadi amaninzi awatywayo. Uvakatye rhoqo eFaris naseMilan. Wayesoloko esebenza ngemifanekiso enjenge-El MacPherson, uNaomiCampbell noEva Herzigova.
U-Broiler uza kubonisa iimpawu ezikhoyo kakhulu kwiimpawu zezinwele ze-2014god. Wanikezela iigrafti zonke iintombazana zikwazi ukuphinda zibuyele ekhaya. Ngoku, ukuba ube nemfashini kunye nesicatshulwa, kungekhona ixabiso elibizayo elihle elihle kunye neentlanzi.
I-Retrostyle iye yafashisa ngoku. Ngenxa yoko le nkcenkceshe iya kuba yinto efanelekileyo kwiqela. Ukuphefumlelwa kwafika kuSasha emva kokubukela uchungechunge oluthi "Mad Men" kunye ne-movie "The Great Gatsby". I-styles in style ye-20-imfashini, i-stylish and chic!
Ndiyabulela kule ndlovu kunye nokugqoka okukhethiweyo ngokufanelekileyo, uya kujonga i-chic kwaye ulungiswe. Olu hlobo luza kunceda ukutsala ingqalelo kunye nembono yabantu. Unokwenza ikhaya ngemizuzu engama-30 kuphela.
Geza iinwele zakho kwaye uphumele ngomlomo. Sebenzisa i-air conditioning ukuze izinwele zidibene kakuhle. Ngoku kwahlula izinwele zibe yimida emancinci ukusuka kumva kwentloko. Faka isicelo se-mousse sokulungiswa okuphakathi kwiinwele. Thatha i-curd kunye ne-curl zonke iipalle ngapha nangapha. Ukugqiba umfanekiso oya kuwufuna itapeyipu "Athenka". Sibeka ifayili phezu kweenwele, unokuyilungisa kunye nabangabonakaliyo. Isiteyimu nehle.
Thatha i-scallop uze udibanise iziphelo zeenwele. Ngaloo ndlela, i-hairstyle iya kubonakala ikhanya. Ukuqokelela iinwele ngezandla zakho uze uyijike emsila ongaphantsi. Sizahlula iinwele zibe zii-curls eziliqela kwaye uzilungiselele "ngokubambisana". Ungakulibali ukuyilungisa kunye neeplati. Xa uwuzalisa nge-elastic, bhathisa iinwele zakho. Ngamacaleni, khululwa iifayile ezimbalwa.
Iimitha kunye nee-curls zihlala zijonge
I-chic ne-fresh trend yavela ngenxa yesitayela se-Victori Rollsi Pin-Up. Iimfashiso kwi style Retro zihlala ziyimfuneko ebomini bethu. Babedume kakhulu kuma-40s no-50s. I-stylish yaba ngumqondiso wexesha le-rockabilly. Le mielelokons yaba ngumqondiso wokuzonwabisa kunye nokuhlaselwa. Phakathi koogqirha, inwele enjalo inikwe uKaty Perry, uScarlett Johansson, uGwen Stefani, uRihanna.
Ngoko, njani ukwenza inwele kwi style of pin-up? Phezu kwentloko sinika indawo yesimisi kwaye siyilungise nge-clamp, siqokelela iinwele kwi-ponytail. Siyidonsa kwaye siyiqokelele kwizinyosi. Yilungise nge-stilettos kunye nabangabonakaliyo. Hlanganisa iinwele phezu kwesithsaba uze uyijike ngentsimbi. Susa ngokucophelela isixhobo sakho ukuze ungonakalisi i-curl. Ebonakalayo ikhuselekile i-curl. Ngoku siyazibandakanya. Ungayifakela kwibhande ekhethekileyo yerabha. Kuya kusebenza. Hlonga iinwele zakho kunye nezixhobo.
Endaweni yecala, unako ukuphelisa iingqungquthela zakho zentsimbi kwaye uphulaze. Zonke iindlela ezikhethiweyo zingabonwa kwi-Intanethi. Kukho amavidiyo amaninzi afundiswayo ngezenzo zenyathelo ngezinyathelo eziya kunceda ukwenza i-hairstyle yezindlu efanelekileyo.
Ngeveki yokuphela kweveki ye-Spring-Ehlobo ka-2014, ezininzi zezinwele kwi style "ezinobungqina bezinwele" zaboniswa. Kuyinto enhle kunye nokuthakazelisa. Izinwele zakho ziphosiwe kwaye zibuyiswe. Ukwenza umfanekiso ololo hlobo, kufuneka usebenzise i-varnish, i-mousse, i-gel. Nayiphi na intombazana iya kuba yintsapho.
Geza zakho iinwele kakuhle uze uyomise nge-hairdryer. Sebenzisa i-conditioner yeenwele ezipholileyo. Faka isicelo se-mousse kwiinwele ze-styling (ngakumbi, bhetele). Kwiingcambu azisebenzi mousse kakhulu, kungenjalo kuya kuba nefuthe "elincinci". U-Breuer wacebisa abantombazana ukuba badibanise iinwele zabo emva kwesikhwama esinamandla kunye nesicatshulwa. Ungasebenzisa inwele yeenwele ezingenabunwele ukulungisa intloko yeenwele.
Le yekhwele esiyibonayo kwikhephethi ebomvu e-Hollywood. Amantombazana amahle anamagquma amahle ... Enhle kwaye emangalisayo. Amaza aseHollywood ayonwabile kwaye ayamnandi, oku kuhamba ngo-2014. Naluphi na ugqoke uya kujonga i-chic kunye neenwele ezinjalo. Kuyafaneleka nawuphi na umfazi kwaye kufanelekile nasiphi na isiganeko.
Geza iinwele uze wenze isicelo se-mousse ekwenzeni. Izinwele ezomileyo zidaywe ngeenwele. "Iingqungquthela zeHollywood" zithetha ukuhlukana kwe-oblique. Ngoku sijika kwiincwele. Ukubaluleka kwebhere, ibharki yokubamba i-conic ene-25 mm ububanzi ifanelekile, iya kujongana kakuhle neengqonge zaliphi na ubude. Ngakolunye uhlangothi, iinwele zengwele kufuneka zihanjiswe kuwe. Emva kwalolu hlobo, kubalulekile ukudibanisa iinwele ngebhasikidi kunye nezidumbu ezincinane. Ingubo yeenwele ngokukhawuleza. Ekupheleni, ufafaze iinwele zakho nge-varnish.
Lo nyaka, ama-stubs amafutshane athandwa kakhulu. U-Sasha Breuer uye wenza ngokuphindaphindiweyo ii-styles ze-hairstyles eziqhelekileyo ubude obude. Ungenza i-punk-style yeirstyle, yenza nje ugubuze izinwele zakho ezimfutshane uze ufefe nge-varnish. Ngubani othanda i-chic, onokuyenza kwisitala saseFransi. Ukuze wenze oku, gudisa iinqwelo zakho nge-gel. Uya kuba yintombazana enobugcisa kunye nentombazana. Yenza into enesibindi kwaye uyabetha ... Bonisa imfesane yakho! Akukho zikhephe. Musa ukuzikhawulela. Ngoku ungenza nantoni na oyithandayo kwaye iya kuba yinto ekhethiweyo kunye nefestile.
Kuphi ngaphandle kobhinqa? Oku kuhlala kufanelekileyo. Ikhwele apho amantombazana asetyenziswa ukugqoka ayenokufakeka nanamhla. Ingumongo ka-2014. Ukubumba akuyona enye yezinwele zee-styles, yinto eyenzekayo nenhle kwintombazana. Unokwenza i-pigtails kwi-style ye-girlgirl okanye iya kugutyungulwa kwentloko ye-pigtail ngendlela yesigidi. Ukuphazamiseka kwama-pigtails kuya kubonakala kunqabileyo kwaye kuyintandokazi kwisitayela "intombazana". Ukuba unxiba iifutshane kunye nekhati elihlambulukileyo, kuya kuba lubuchule.
Ingcali uSasha Breuer uyavuya gqitha ngeenwele zakhe. Ngoku siyazi ukuba yintoni imfashini kulo nyaka. Iimifanekiso zowesifazane kunye nezitsha ziza kunika nayiphi na intombazana ukuzithemba. Uya kuba sebala. Zama kwaye wenze ezo zibopho zezinwele ekhaya. Yiba ngowakho umcwangcisi.
Iingubo zokugqoka kwiifolo - i-summer of summer 2014
Iimpawu ezihamba phambili zexesha lekwindla kubusika 2009 - 2010
Iibhola zePeanut kwi-glaze
Ukuhlaziywa kwe "Indiana Jones kunye noBukumkani be-Crystal Skull"
Ndifuna ukuba neenwele ezintle ezinempilo
Ukuxinezeleka, andisayi kuphinda ndijongane nayo
Ukuqhuba imoto kuthintela njani impilo yowesifazane?
Izifundo zokuqala zokufundisa abantwana abancinci